Umatshini weengxowa zamaphepha eChina Beyin upakisha
Ihowuliseyili icala gusset ibhegi iphepha irayisi
Side bag gusset luhlobo ingxowa nokupakisha bhetyebhetye ukuba asonge macala mabini engxoweni tyaba eqhelekileyo kumphezulu engaphakathi ibhegi, kwaye wenze ukuvulwa okweqanda yokuqala iba ukuvulwa buxande, kwaye ngenxa emva ukusonga, emacaleni ingxowa zifana tuyere amagqabi, kodwa avaliwe. , Ke ingxowa ibizwa ngokuba yingxowa yomzimba, kananjalo kuba injengomqamelo xa ugcwalisa imveliso, abanye ke bayibiza ngokuba ngumqamelo umqamelo.
Umthengisi weengxowa zephepha lasezantsi lase China
Iphepha lokwenziwa lenziwe nge-kraft pulp, ihlala ibamdaka ngokukhanyayo, ukhilimu okanye umbala omhlophe. Iyaguquguquka kwaye yomelele, inokuchasana okuphezulu, inokumelana noxinzelelo olukhulu kunye noxinzelelo, yinto elungileyo yokupakisha. Ukongeza, kuba iphepha lekraft li-eco-friendly kwaye liyaphinda linokuphinda lisetyenziswe, kwaye lihle, ngoku liyathandwa ngakumbi kwaye liyonyuswa.
OEM ukuphakama ibhegi iphepha zip ngefestile
Yibhegi yokupakisha eguqukayo enesakhelo senkxaso ethe tyaba emazantsi, inokuma eshelufini ngaphandle kwenkxaso, nokuba ibhegi ivuliwe okanye ayivulwanga. Ezantsi kunesiphetho ngasemva kunye nemiphetho emibini yokutywina, enye ngasekhohlo enye ngasekunene, kwaye inokuzimela ngokwayo emva kokuba umzantsi wolulwe.
Ingxowa yokuma yenye yeefom zokupakisha ezaziwa kakhulu, ngokubonisa ishelufu okugqwesileyo. Ukongeza, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zomthengi ngamnye, ukuphakama kweebhegi kunokongeza izinto zoyilo ezizodwa, ezinje ngeziphatho, izishwankathelo ezigoso, iziphu ezinokuphinda zisebenze, njl. Njl., Oko ke kukhulisa umnqweno wabathengi wokuthenga.
Ibhegi yephepha ecwangcisiweyo
Flat ibhegi, ekwabizwa ngokuba ibhegi yamacala amathathu, kuba itywiniwe macala omathathu, kwaye ishiya kuphela ukuvulwa okukodwa kwabasebenzisi ukuba bafake kwiimveliso. Ingxowa tyaba lolona hlobo luqhelekileyo nolulula. Ukuxinana komoya kwengxowa epakishileyo yokupakisha yeyona ilungileyo, kwaye lolona hlobo kuphela olunokusetyenziswa njengebhegi yokucoca.